Cadaadiska ka ah ciidamada jinka waa mid dhab ah | Apg29
Haddaba waxaan doonayaa inuu u marag furo in ugu xumaa ee aan soo maray marka la eego cadaadiska ciidamada jinka.
Cadaadiska ka ah ciidamada jinka waa mid dhab ah in ka harayna uu ruux xun dunida. Masiixiyiinta Live, sidii Rabbigu lahaa hadiyad qiimaynta ruux ayaa inta badan waxaa ay dareemaan cadaadis this. Waxaan ahay mid aad u xasaasi ah ruuxayga iyo markhaati kaci karaan sida aan la kulmaan this ifafaale.
Haddii aan ka baxo magaalada, waxaan la kulmaan qof qaba ruuxa qabow oo kulul a iyada gudahood. Oo haddana waxaan dareemayaa in ay "la afuufo" nijaas iiga qofkaas.
soo horjeeda - haddii aan la kulmo qof la meletariga la afuufo durdur macaan qofka.
ciidanka jinka of dhalooyin khamri
Waxaan mararka qaarkood gudbay Systembolaget oo caan ah inuu nasto ciidanka jinka ka dhalooyin khamri. sidoo kale waxaan ogahay xoogga jinka ee sigaarka ah.
Marka ay jirto a xubno barnaamijka wiswis on TV la afuufo ciidamada Hadalka Xunba wuxuu iga gees ah. Sidaas daraaddeed waxaan barnaamijyada marnaba xun iyo burbur.
In jadwalka barnaamijyadooda warbixinta ka hor inta caadi ahaan xubno ka waayeen wasakh naftayda in in Ciise maydhay uu dhiiggii qaaliga ahaa oo la. Sidaa darteed, waxaan indhaha iyo dhegaha iyada qaban si looga fogaado markuu arkay oo dhegaysanaya.
Waxaan dareemayaa music culus biraha jinka, gaar ahaan marka ay jiraan xubno shaydaanka. Waxaan marnaba dhagaysan sida "music", maxaa yeelay, waxaan u dareemaan si xun gaadho. Anigu ma aan samayn sida music dhagax weyn guud ahaan. Laakiin ayaa duulduul sida laakiin si ay u rabto.
Qaar ka mid ah waqti ka hor, waxaan ku noolaa meel meesha tuugaggu baaskiil ahaayeen on dhaqaaqo. Waxaan la dhacay of my baaskiil, oo aan taagay meel ka baxsan dhismaha halkaas oo aan ku noolaa. Haddii aan si sax ah xusuusan, baaskiilka la qufulay, laakiin weli la xaday.
Qof baa i soo siiyey oggayn in ay si Dadka Park, kaas oo dadka loo isticmaalo inuu ka tago baaskiilada xaday tagaan.
Aan addeecin Council oo u tegey park ay u baadhaan my baaskiil. Waxaan ku wareegsan tegey meel walba raadinaya. dhacdooyinka Entertainment The dhammeeyey oo qof ayaa ka tagay beerta, laakiin waxaan dareemay xoog ruuxaygu in ciidamada ruuxa sharka leh raagin. Waxaan la kulmay jawi ay kooxo badan oo caynkaas ah.
Waxaan marnaba awoodi doonaan in ay soo booqdaan dhacdo shaneemo, qoob ka ah, isboorti dhacdooyinka ama goobaha kale ee madadaalada. Waxaan la kulmi lahaa wasakh ah sida iyo jawi xun in aanan anigu ku adkaystay inaan halkaas.
The ugu xumaa waan soo maray
Haddaba waxaan doonayaa inuu u marag furo in ugu xumaa ee aan soo maray marka la eego cadaadiska ciidamada jinka. Waxaan ka baxsan iyo guriga Vasaloppet in Mora soo maray.
guriga Vasaloppet ahaayeen bytardagar of cirbadaha Vasaloppet. Dadka loo isticmaalaa in ay jiraan iyo is-dhaafsiga, gadashada iyo iibinta fadhiisan. Xaaskeyga lahaa qaar ka mid ah in markay u sii socotay inay iibiso, sidaas oo kale ayaan iyada la tageen gurigii Vasaloppet ee. Xitaa sida aan taagnaa banaanka soo galo qolka, waxaan dareemay iyo fikirka, 'Waa maxay niyadda xun in ahaaday halkan. "
Haddaba, waxaan galay balbalada, halkaas oo ay dareemeen nijaas, jawi xun xoogan.
In qaybta hoose oo ahaa qol ay ku jiraan kuwa bedelay cirbadaha ay fadhiya miisaskoodiina. Waxaan halkaas hoos ugu tegey, oo wuxuu arkay in ay jiraan dad badan oo halkaas kuwaas oo doonayay in ay ku riday cirbadaha ay.
ciidamada jinka igu soo yaaceen
Markii aan soo galay qolka muquurtay ciidamada jinka iga gees ah xoog weyn. Waxaa dareemay sida nin xoog leh qofka gadaal igu riixay. Waxaan ku dhowaa inaan lumin uu dheelitirka iyo dhacay ku dhawaad ​​in ka badan.
Laakiin markaas Ruuxa Quduuska ah talaabo ku xoog badan igu dhex, ka hortaga ka dhanka ah ciidamada jinka. Waxaan dareensanahay inaan u qaaday oo aan u qaadeen Ruuxa Quduuska ah.
ruuxa dunida Xun
Waxaan yihiin kuwa badbaadayaa leeyihiin dunida ruuxa inay la diriraan ah. awoodaha ay yihiin wax ay la ciyaari. Waxaan runtii awoodin in ay la kulmaan. Waxaad leedahay in la wada buuxsamay Ruuxa Quduuska ah iyo ku nool yihiin si ay dhiig u Ciise ee ilaalinta ah in la sii raagayaan.
Ciise ayaa adkaaday gacanta ka sharka leh. Waxa uu ku guulaystay iyo hubka taliyayaashii boqortooyadiisa sharka. Waxa uu la jajabiyey abeesadii madaxa iyo sameeyey xoogga Ibliisku ee waxba. Waxaa jira erayga Ilaah, kaas oo ay xoojisaa our geesinimada iyo keentaa raaxo:
"Carruurta Gacaliye, waxaad tahay Ilaah ka yimid oo iyaga ka adkaaday, kan waa in aad waa weyn yahay kii, waxaa dunida" (1 Yooxanaa 4:. 4).